टी "फ्लाइंग निगल"
Phyto-tea "फ्लाइङ्ग निगल" पहिलो वजन को वजन घटाने को लागी एक हो, जुन एक पल्ट सीआईएस बजार मा जीत भयो। तथापि, चाय फ्लाइङ्ग निगल बारे समीक्षाहरू धेरै विवादास्पद छन्, यस पेयका केही कुर्सीलाई सामान्य बनाउनको लागि मद्दत गरे, केही गर्न जाने बाध्यता र शौचालयमा सुत्न सकिन्छ, र त्यहाँ त्यहाँ सबै परिवर्तनहरू महसुस भएन। मौलिक विविध परिणामहरूको कारण चिनियाँ चाय फ्लाइङ्ग निगलको संरचनामा छ, किनभने यो एक वास्तविक आहार पूरक हो, यो एक उत्पाद जो कि सक्रिय पदार्थहरू समावेश गर्दछ जुन प्रत्येक मार्फत शरीरमा अन्तरक्रिया गर्दछ। त्यसकारण, यो चायको स्वागतबाट निर्माताहरू र नर्स परिणामको गजिकल प्रतिज्ञाहरू निष्पक्ष रूपमा बुझ्न प्रयास गरौं।
फ्योटो चिया "फ्लाइंग निगल" को भाग को रूपमा तपाइँ भेट्टाउनुहुनेछ, ज्ञात जड़ी बूटियों, र भारतीय, तिब्बत र चिनियाँ पौडीहरु धेरै विदेशी नामहरु संग मिलेर:
अनौठो फलको फल
hawthorn को फलों;
.... र धेरै अन्य जडी बूटियों, तपाईंको चासो को आधार मा निर्भर गर्दछ।
उत्पादकहरूले आफैले वजन गुमाउने प्रभावलाई सीमित गर्दैनन्, अनुसार "फ्लाइंग निगल" गुर्दे, जिगर, हृदय र endocrine प्रणाली normalize, पाचन पथ सफा गर्छ, विषाक्त पदार्थ र विषाक्त पदार्थ हटाउँछ, बोसो जलाउँछ , र छालाको पुनरुत्थान गर्छ! या त यो आफ्नो भाग मा यस तरिका को लिखने को लागि ईमानदार छ, या - तपाईं वास्तव मा एक पनीर देखि पहिले!
र "फ्लाइङ्ग निगल", र वजन घटानेको लागि कुनै पनि अन्य चिया एक उत्साह र डेरिरेटिक छ । वजन खोने को प्रभाव साँच्चै हुनेछ, तर केवल डिभिड्रेसन र आंतबाट सबै स्टूल को हटाउनुको कारण, "बैठक कोठा" मा जाने पछि तपाइँ लामो समयसम्म खाना चाहनुहुन्न। मलहरूको साथमा सारा माइक्रोफ्लो आंतबाट बाहिर धोईएको छ, खानाबाट भिटामिनहरू आकलन गर्न समय छैन, र त्यसमा भंग पार्ने, खनिज र फेरि भिटामिनहरू तरलसँग रिहा गरिनेछ।
यदि तपाइँ अझै पनि मौका लिन चाहानुहुन्छ भने, चाइनालाई कसरी पिउने "फ्लाइंग निगल" भनेर विश्लेषण गर्नुहोस्:
250 मिलीलीटर उर्लिएर पानीको 1-2 प्याकेजहरू ब्रेक गर्नुहोस्, हामी 3-4 मिनेटभित्र जोड्छौं। तपाईं चीनी, महोदय वा नींबू थप्न सक्नुहुन्छ। बिस्तर जाने अघि, तर एक दिन राम्रो, जब तपाईं घर छोड्नु पर्दैन, किनकि मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईं सम्पूर्ण दिनको लागि "व्यस्त" हुनुहुनेछ।
र अन्तमा, वजन घटाने को लागि चाय को विपरीत संकेत "फ्लाइंग निगल":
एक ढीला स्टूल झुकाव;
स्किङमा हिड्ने राम्रो र खराब छ
Apple - caloric content
रातो पर्वत आश - राम्रो र खराब देखि जाम
सर्मीले वजन घटानेको लागि माछा
खेलहरूको लागि भिटामिन
अदरक कसरी महो र नींबूको साथ पकाउने?
महारानी संग क्रेनबेरी - उपयोगी गुण र विनाशकारी
स्ट्रबबेरीमा कति कार्बोहाइड्रेट छन्?
स्लिमिंगको लागि प्र्यून
पनीर देखि आहार को व्यंजन
पिज्जामा कितने क्यालोरीहरू छन्?
ब्ल्याकबेरी - क्यालोरी सामग्री
कसरी वजन घटाने को लागि Siofor 500 ले?
सूखे माछा - राम्रो र खराब
कसरी प्रसिद्ध हुन?
छिटो बढ्दो पतलीको लागि सरल आहार
छिटो बढ्दो पनीरियल हेज
मेकअपको चमत्कार: श्रृंगार कलाकार गौहर एटिटेसन बाट 18 अविश्वसनीय परिवर्तनहरू!
हर्वे वाइनस्टाइनले पूर्व-Mossad एजेन्टहरूको सेवामा सहज गरे, आफ्ना पीडितहरूलाई डरलाग्दो
कोट मोडेल 2013
किन धेरै कुकुर सपनाहरू छन्?
सर्दको लागि सूखेको लागि सूखे टमाटर
जन्म 28 हप्तामा जन्म
वसन्तमा गाजर रोपण
10 सेलिब्रेटीहरु जसले सामाजिक सञ्जालमा कुनै खाता सिर्जना गरेनन्
बीउ बाट कसरी शुरपा पकाउने?
जीन्स एक तंगमा
पृथ्वीको पर्व दिन
पनीर - नुस्खाको साथ जाजरको चीज
वसन्त रंगको लागि इत्र: गोलाकारहरूको लागि उत्कृष्ट सुगंध
आमाको निवासमा नयाँ नवजात कसरी प्रस्तुत गर्ने?
भाइरस वजन घटाने को लागि गुलाब